Ku saabsan feyruska cusub ee corona | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Bulsho / Wararka / Ku saabsan feyruska cusub ee corona
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 20 5 2020
Wakhtiga iminka faayraska cusub ee karoona ayaa ku faafay Iswiidhan iyo aduunka intiisa kale. Faayraskan wuxuu sababaa cudurka covid-19. Dadka oo dhan mas’uuliyad ayaa ka saaran in laga hortago faafinta cudurka covid-19. Ka durug dadka kale marka aad joogtid meel gudo ah iyo banaanka labadaba.
Halkan waxaad ka helaysaa su'aalaha iminka jira iyo jawaabaha ku saabsan sida faayraska karoona uu raad ugu yeelan karo caafimaadkaaga iyo xaaladaada nolosha.
Sawirka gacmo la dhaqayo.